उत्कृष्टताका मापक निजी शिक्षालय : एसभी कलेज प्रिन्सिपल अरविन्द झा | Hindu Khabar
March 31, 2020 4:28 am || ॐ भूर्भुव स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गोदेवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ||
उत्कृष्टताका मापक निजी शिक्षालय : एसभी कलेज प्रिन्सिपल अरविन्द झा
१५ असार २०७५, शुक्रबार १०:४४ मा प्रकाशित In: Breaking news, अन्तर्वार्ता, मुख्य खबर
अरविन्द झा एसभी कलेज शङ्खमूल नयाँबानेश्वर काठमाडौँका प्रिन्सिपल हुन् । फिजिक्समा एमएससी झा पीएचडी स्कलर हुन् । लामो समय त्रिचन्द्र कलेज तथा उपत्यकाका अन्य कलेजमा प्राध्यापन गरेका झा अध्यापनमा खरो मानिन्छन् । निजी शिक्षालयका सम्बन्धमा हिन्दुखबर डटकम अनलाइनले प्रिन्सिपल झासँग गरेको कुराकानीको सार सङ्क्षेप—
– निजी क्षेत्रका शिक्षालयबारे यहाँको धारणा बताइदिनुहुन्छ कि ?
निजी विद्यालय रोज्ने मुख्य उद्देश्य नै राम्रो हेरचाह हो । यहाँ अभिभावकको चाहना अनुरूप प्रतिफल दिने प्रयत्न गरिन्छ । यही कुरा आत्मसात् गरेर निजी शिक्षालयहरू सफल भएको पनि देखिन्छ । आज सामुदायिक शिक्षालयहरूको गुणस्तर उठाउन गरिएको पहल पनि निजी शिक्षालयहरूकै उत्कृष्टतासँगको तुलना हो । शिक्षामा गुणस्तर ल्याउने श्रेय निजी शिक्षण संस्थालाई नै जान्छ ।
-निजी शिक्षण संस्थाबीचको प्रतिस्पर्धाका सम्बन्धमा के भन्नुहुन्छ ?
गुण र दोष हरेक क्षेत्रमा पाइन्छ । निजी शिक्षालयको गुणस्तरका कारण आज नेपालका जनशक्ति विश्वका हरेक प्रतिस्पर्धामा अब्बल दरिएका छन् । निजी शिक्षालय खुल्नुअघि नेपाली जनशक्ति यसरी विश्वस्तरमा खरो उत्रिएका थिएनन् । सीमित विद्यार्थी भर्ना लिएर उत्कृष्टता प्रदर्शन गर्नु एउटा पाटो हो भने यसैलाई कमाउ धन्दा बनाएर एउटै तहका धेरै कक्षा चलाएर अभिभावकलाई गुमराहमा पार्नु चाहिँ गलत हो । एउटा संस्थाले अर्को संस्थालाई होच्याउनु पनि राम्रो होइन । निजी संस्थाबीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुनु राम्रो पाटो हो । यस्ता संस्था नाफाखोरी नभई सेवामुखी हुन सक्नुपर्छ ।
-आफ्नो शिक्षण संस्थाबारे केही बताइदिनुहुन्छ कि ?
हाम्रो शिक्षण संस्था आफ्नै पूर्वाधारले सुसम्पन्न छ । सहरको मध्य भागमा भएर पनि उपयुक्त शान्त वातावरण, फराकिला कक्षा कोठा, सम्पन्न ल्याब, पुस्तकालय र खेलकुदका लागि पर्याप्त खाली ठाउँ एवं खेल सामग्रीले सुसज्जित छ । अनुभवी र समर्पित शिक्षक समूह यसका गहना हुन् । अतिरिक्त व्रिmयाकलापका विभिन्न विधामा हाम्रा विद्यार्थीले उत्कृष्टता प्राप्त गरेका छन् ।
– शिक्षण संस्थाको आफ्नै पूर्वाधारका हुनु र नहुनुमा के अन्तर हु्न्छ ?
आफ्नै पूर्वाधार भएका शिक्षण संस्थाहरूमा स्थायित्व देखिन्छ । भाडाका पूर्वाधारमा कहिलेकाहीँ सत्रको बीचमै ठाउँ सर्नुपर्ने समस्याले विद्यार्थीमा नकारात्मक अवस्था आउन सक्छ । अर्को कुरा आफ्नो पूर्वाधार नहुँदा भाडामा धेरै लगानी पर्ने हुनाले शुल्क पनि महँगो पर्छ । आफ्नै पूर्वाधार हुँदा कम शुल्कमा पनि शिक्षामा गुणस्तरीयता आउँछ । घरभाडामा धेरै खर्च आउँदा राम्रो शिक्षक व्यवस्थापनमा पनि कन्जुस्याइँ गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । शिक्षण सुविधामा मितव्ययी हुनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । त्यसैले अभिभावक शिक्षण संस्थाको पूर्वाधारबारे सचेत हुनैपर्छ ।
– अतिरिक्त व्रिmयाकलापका सम्बन्धमा यहाँको धारणा के छ ?
शिक्षालयमा हुने अतिरिक्त व्रिmयाकलापले विद्यार्थीलाई ऊर्जा दिन्छ । मस्तिष्क ताजा बनाउँछ र पढाइमा ध्यान केन्द्रित गर्न सघाउँछ । यसले विद्यार्थीलाई अनुशासित हुन र साथीको महत्त्व सिकाउँछ । चौतर्फी विकासका लागि अतिरिक्त व्रिmयाकलाप अत्यावश्यक मानिन्छ । हाम्रो एभी कलेजले अतिरिक्त व्रिmयाकलापलाई महत्त्व दिएअनुसार विभिन्न प्रतियोगितामा उत्कृष्ट नतिजा प्राप्त गरेको छ ।
– बाहिरी जिल्लाबाट आउने विद्यार्थीलाई कसरी सहजीकरण गर्नुहुन्छ ?
विशेषगरी राजधानीमा कोठा भाडामा लिनु पनि समस्या छ । अझ नयाँबानेश्वर क्षेत्रमा त कोठा पाइनु पनि संयोग नै मान्नुपर्ने अवस्था छ । यस असुविधालाई मध्यनजर गर्दै हाम्रो कलेजले सुविधायुक्त छात्रावास व्यवस्थन गरेको छ । छात्र र छात्राका लागि भिन्दाभिन्दै आवास छन् । विद्यार्थीको मनोविज्ञान बुझ्ने अनुभवी शिक्षक/शिक्षिकको निगरानीमा घरायसी वातावरण एवं उपयुक्त शुल्कमा विद्यार्थीहरूलाई आवासीय व्यवस्था छ ।